‘बेवारिसे लाशलाई लुछिलुछी खाँन्छन् गिद्धहरु' शवमाथि राजनीति हुन्छ, घटना मन्त्रीसम्म पुग्छन् । - PUBLIC AAWAJ-पब्लिक आवाज
‘बेवारिसे लाशलाई लुछिलुछी खाँन्छन् गिद्धहरु’ शवमाथि राजनीति हुन्छ, घटना मन्त्रीसम्म पुग्छन् ।
प्रकाशित : बिहिबार, असोज ०९, २०७६१८:२४ पब्लिक आवाज /संवाददाता
नवीन पौडेल ‘बेवारिसे लाशलाई लुछिलुछी खाँन्छन् गिद्धहरुले, तर मेरो लास बेवारिसे होइन, मेरो आमा छिन् र बा पनि’, काठमाडौँको अनामनगरस्थित मण्डला थिएटरको प्रेक्षालयमा आवाज गुञ्जिन्छ ।
बस सडकबाट ५० मिटर तल खसेर दुर्घटना : ३ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, १९ घाइते !
मुलुककै कान्छो मेयरको ‘रेस्क्यू टिम’ले बीचमै फँसेका ८ जनालाई जीवितै उद्धार !
जीप सडकबाट १५ मिटर तल खस्यो, पाँच घाइते तीनको अवस्था गम्भीर !